I-Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition, ithebhulethi ethokozisayo ene Windows 10 | Izindaba zamagajethi
I-Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition, ithebhulethi ethokozisayo ene Windows 10
AmaVillamandos | | Izibuyekezo, Tablets
Isikhathi esithile manje, imakethe yamathebulethi iyaqhubeka nokuwela ekuthengiseni ngenxa yokuthi lawa madivayisi ayathandwa kakhulu kubasebenzisi. Izimbangela eziyinhloko impumelelo yokuvela kwamadivayisi eselula osayizi owandayo kancane kancane abelokhu edla isiza kuze kube manje sinamathebulethi. Ngaphezu kwalokho, izinguquko ezimbalwa abakhiqizi abakwazile ukuzethula kube enye imbangela yokuncipha komthelela emakethe yalolu hlobo lwedivayisi.
Kodwa-ke, ukufika emakethe entsha Windows 10 nokwethulwa kwalolu hlelo lokusebenza kwamanye amadivayisi, kunikeze impilo entsha ematafuleni, okungenani kwezinye izimo. Isibonelo esicacile yi- I-Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition, ukuthi sikwazi ukunambitha emasontweni adlule futhi lokho kusishiyele ukunambitheka okuhle emilonyeni yethu.
Ngokuklanywa okungajwayelekile, okuqukethwe okubhekiswe kokuncane kunakho konke kwendlu, zonke izinzuzo ze-Windows 10 entsha kanye nentengo ephansi kakhulu, ezinye zezici eziyinhloko zale divayisi ezingaguqulwa ngokushesha futhi zilula nsuku zonke ohamba naye.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngale divayisi kusuka enkampanini ye-Energy Sistem, qhubeka ufunde, ngoba sizokutshela izinto eziningi nombono wethu ngemuva kokuyisebenzisa izinsuku ezimbalwa.
2 Izici kanye Imininingwane
3 Isoftware nokusebenza
4 Izici ezinhle
8 Intengo nokutholakala
Ukuthi siyafuna noma cha kuzoba nzima ukukwenza Ukwakheka kwale Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition akubonwa muntu futhi umbala wayo ophuzi ugqame ngokushesha. Sibhekene nethebhulethi ehlanganisiwe enezilinganiso ezincishisiwe zamamilimitha angama-213 x 127 x x 10. Isisindo saso esingu-368 amagremu singaphakama kancane ngosayizi waso, kepha abasebenzisi abaningi ngeke baze babone ukuthi singaba nesisindo segremu eyengeziwe.
Ngaphambili sithola i-screen esingu-8-intshi esihlala cishe sonke isikhala kanti ngemuva kunekhamera nesipikha kuphela ezigqamile kuphuzi okumboza wonke umhlane. Siphinde futhi sithole uphawu oluhle njalo lwe-Energy Sistem ne-LEGO.
Zonke izinkinobho zedivayisi ziphezulu nangakwesokudla, zishiya umphetho ongezansi nohlangothi lwesobunxele zihlanzeke ngokuphelele, into eyaziswa njalo.
Izici kanye Imininingwane
Ngokulandelayo sizobuyekeza okuyinhloko izici nokucaciswa kwale Energy Energy 8 ”Windows Lego Edition;
Ubukhulu: 213 x 127 x 10 mm
Isisindo: 368 amagremu
Isikrini: 8-intshi IPS, 16: 9 esibanzi futhi nesisombululo se-HD samaphikseli ayi-1.280 x 800
Iprosesa: I-Intel Atom Z3735F efinyelela ku-1.83Ghz
Imemori ye-RAM: 1 GB
Isitoreji sangaphakathi: 16 GB iyanwetshwa ngamakhadi e-MicroSD aze afike ku-64 GB
I-WiFi 802.11 b / g / n
Ikhamera yangaphambili enenzwa engu-2 megapixel
Ikhamera engemuva enenzwa engu-2 megapixel
Ibhethri elinokuzimela okungafika emahoreni angu-8
Enye yezinto ezihehayo zale Energy Energy 8 ”Windows Lego Edition evela kwa-Energy Sistem ukuthi ine amawindi amasha 10 njengohlelo lokusebenza. Ukusebenza kwayo kuyamangaza futhi uma sinaka ukuthi ineprosesa engaphezulu noma ejwayelekile, ngaphandle kokugqamisa kokuhle noma kokubi futhi nge-1GB ye-RAM singenza noma yimuphi umsebenzi ngaphandle kwenkinga futhi siyikhameze emikhawulweni engalindelekile.
Yize kuyidivayisi eyakhelwe indlu encane kunazo zonke, ingasetshenziswa yinoma yiluphi uhlobo lomuntu ngoba, ngokungafani namanye amadivayisi alolu hlobo, ayishodi ngezinzuzo noma ukusebenza. Ngemuva kokuyihlola nokuyikhama, imiphumela ibe ngaphezu kokugculisa ngezinye zezicelo ezifuna kakhulu emakethe futhi neminye imidlalo edinga izinsizakusebenza eziningi ukwenza ezingeni elihle.
Okunye okuhehayo kakhulu kuleThebulethi Yamandla i- okuqukethwe okukhethekile esikunikezwa ngesimo semidlalo yeLEGO, phakathi kwalo i-LEGO City noma i-LEGO Friends evelele futhi namavidiyo, izithombe nokunye okuningi okuzokwenza okuncane kakhulu kwendlu ngisho nomuntu omdala akujabulele kakhulu.
Izici ezinhle kakhulu engizitholile kule Energy Energy 8 ”iWindows Lego Edition ibe kwindawo yokuqala ukwakheka kwayo. Futhi ukuthi sibhekene nedivayisi enosayizi ongalawuleka kakhulu, kanye nobumnandi futhi ngaphezu kwakho konke okusivumela ukuthi siyisebenzise nganoma isiphi isikhathi noma endaweni.
Ngikuthandile impela lokho yize kuneqiniso lokuthi libukeka njengethebulethi elibhekiswe ezinganeni ezincane, Kuyithuluzi umuntu angalisebenzisa ngaphandle kwenkinga.. IWindows 10 ingahle ibe yinkimbinkimbi kakhulu enganeni encane, kepha ilungele umuntu onjengami noma wena.
Ukuvala lesi sigaba angifuni ukukhohlwa ukusho intengo njengento enhle kakhulu futhi lokho kungukuthi ngama-euro angaphezu kwe-100 singathenga le thebhulethi futhi sikujabulele.
Mina ngobuqotho Kube nzima ukuthola noma yini engalungile yale divayisi ye-Energy Sistem futhi ngicabanga ukuthi isiyonke ingaphezu kokuthakazelisa futhi maqondana nentengo yayo inekhwalithi engaphezu kokumangazayo.
Kodwa-ke, uma siqalaza singasho ukuthi uhlelo olusebenzayo lwe-Windows kungenzeka lungalunge kakhulu ukuthi izingane zethu zilusebenzise, ​​ngokwesibonelo, noma ngokwenza umkhuba omncane bangagcina beyiphatha kangcono kunathi.
Ukuqhubeka nokubheka isici esingesihle, singasho futhi ukuthi umbala ophuzi wale Energy Energy 8 ”iWindows Lego Edition ayiwona ofanele kakhulu ngoba uma siphuma nale divayisi sizobonwa kude futhi sizodonsa amehlo noma yimuphi umuntu.
I-Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition
Uhlelo olusebenzayo mhlawumbe luyinkimbinkimbi kakhulu ezinganeni
Le Energy Energy 8 ”Windows Lego Edition isivele ingathengwa isikhathi esithile kunoma iyiphi indawo enkulu noma esitolo esiku-inthanethi. Intengo yayo ingaphezu kwama-euro angama-100 futhi ngokwesibonelo e-Amazon ingathengwa ngentengo yama-euro ayi-104,40.
Ubucabangani ngalesi Sistem Sezamandla?.
Imininingwane engaphezulu - energysistem.com
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition, ithebhulethi ethokozisayo ene Windows 10
Thola ama-anecdotes athakazelisayo ngoSteve Jobs
Lezi yizinto ezintsha ezisuswe yi-MWC 2016